ဒေါက်တာယာဉ်မောင်း APK ကို Download လုပ်ပါ - အကောင်းဆုံးယာဉ်မောင်းဂိမ်းများအွန်လိုင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » ဒေါက်တာယာဉ်မောင်း APK ကို Download လုပ်ပါ - အကောင်းဆုံးယာဉ်မောင်းဂိမ်းများအွန်လိုင်း
Download ဒေါက်တာယာဉ်မောင်း APK ကို - အကောင်းဆုံးယာဉ်မောင်းဂိမ်းများအွန်လိုင်း APK ကို
သငျသညျကားပြိုင်ကားပန်ကာရှိပါသလား ထိုအခါသင်သည်ဒေါက်တာတစ်ဦးပါမောင်းနှင်ပေးရမည်။ ဒေါက်တာယာဉ်မောင်းသင်ဂိမ်းများကိုကားမောင်းအကြောင်းကိုအရှုးဖြစ်၏လျှင်သင်ခစျြလိမျ့မညျမယ့်စိတ်ကူးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အမြင်အာရုံနှစ်သက်ဖွယ်ဂိမ်းသင်ကဲ့သို့အစာရှောင်သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်လမ်းများမှတဆင့်ကိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်များနှင့် finish ကိုရိုက်နှက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ multiplayer ဂိမ်းထဲမှာသင်အခမဲ့ကိုရွှေလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ 1,000 ကိုရွှေဒင်္ဂါးပြား၏တစ်ဦးကအမြင့်ဆုံးသင်တို့အားပေးကြမည်ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာယာဉ်မောင်းစပိုင်းတွင်ဇွန်လ 2013 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်နေစဉ်, အဲဒါကိုအလွန်လူကြိုက်များ app ကိုအောင်, နိုဝင်ဘာလ 2018 အတွက်အဓိက update ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီဂိမ်းကိုသာက Android device များအတွက်လက်ရှိအချိန်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည်အခမဲ့မောင်းနှင်မှု app ကို 5.24 ကို MB မှာအလွန်လေးလံသောမဟုတ်ပါဘူး။ ဤနေရာတွင်ဤမျှဝေး 100 သန်း downloads, ကျော်ရှိခဲ့သည်။
အခမဲ့အန်းဒရွိုက်ပြိုင်ကားဂိမ်းသန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်နေစဉ်, ဒေါက်တာယာဉ်မောင်းကိုယ်တိုင်နာမည်တစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ဒါဟာအစက iOS device များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကကားမောင်းခြင်း simulation ဂိမ်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂိမ်း, စိန်ခေါ်မှုအဆင့်မျိုးစုံကို formats features များနှင့်ယခုနှစ်အကောင်းဆုံးကားတစ်စီးခြင်း simulation ဂိမ်းအကြားဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ။
ဒေါက်တာယာဉ်မောင်းမျိုးစုံအဆင့်ဆင့်, မော်ဒယ်များ, သင်ရှေ့ဆက်အားသွင်းဖို့လှုံ့ဆော်သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်အနိုင်ရနိုင်သည်ကိုဆုလာဘ်တန်ချိန် featuring Simulator ကိုဂိမ်းများကိုကားမောင်းတဲ့ပျော်စရာပါပဲ။ ဒါဟာအလွန်တိတ်ဆိတ်ဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူးကတည်းကဒါဟာသင့်ရဲ့ adrenaline အားသွင်းနှငျ့သငျအဆုံးပေါ်နာရီယစ်စောင့်ရှောက်ဖို့သေချာပင်ဖြစ်သည်ရှိသည်ဖို့သေချာသည်။ သင်ဘယ်ဖက်နဲ့ညာဖက်ခုတ်မောင်းအဖြစ်, အတားအဆီးများကျော်လွှား, လူစည်ကားမြို့ကြီးများရဲ့အလယ်တဆင့် Race မှရပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုပိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အငယျဆုံးသောအာရုံစေသည်သောဒိုင်ခွက်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်နေကြသည်။
app ကိုဖွင့်လူကြိုက်များမှုများအတွက်အမှန်တကယ်အကြောင်းပြချက်သို့သော်၎င်း၏ဂရပ်ဖစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာဇာတ်ကောင်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သည့်မော်တော်ယာဉ်များဂိမ်းတစ်ခုကြည်နူးဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုအောင်, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ ဂိမ်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးအလွန်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြ၏။ သင်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ, ရွှေနှင့်အခြားဆုလာဘ်ဝင်ငွေနိုငျသောမစ်ရှင်၏ပဒေသာတလွှားရောက်လိမ့်မည်။
Sud သို့မဟုတ်စတူဒီယို Up ကို Down အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, ဒီ app ဟာသူတို့ရဲ့ adrenaline-ဖြည့်ကားတစ်စီးပြိုင်ကားစိတ်ကူးယဉ်ပိုဆိုးနေဖြင့်ပျော်ရွှင်ပရိသတ်တွေနဲ့ content သန်းပေါင်းများစွာဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ သငျသညျအရပထမဦးဆုံးကားကို KOS ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ သင်ကစားပွဲနှင့်အတူတိုးအဖြစ်ကားကို upgrade လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏အနိုင်ရရှိတဲ့အသုံးပွုနိုငျ - ဖြစ်စေဒင်္ဂါးပြားသို့မဟုတ်ရွှေပုံစံ - သင့်ကားကို upgrade လုပ်ဖို့။
အဆိုပါဂရပ်ဖစ်အံ့မခန်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်ကစားရန်အလွန်ပျော်စရာဖြစ်ကြသည်။ က GT ကို2သို့မဟုတ် RR3 အတွက်ဂရပ်ဖစ်ကဲ့သို့ခေတ်မီမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးလုံလောက်သောအလုပ်ပါပဲ။ ထိုကဲ့သို့သောအမြန်နှုန်း, နစ်, ဆီထိရောက်ရေး Drive ကိုတစ်ဦးက Truck ကား, အဝေးပြေး, မြန်နှုန်းကားရပ်ရန်နှင့် VIP အစောင့်အဖြစ်ဒေါက်တာယာဉ်မောင်းနှင့်အတူမျိုးစုံဂိမ်း Modes သာရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Modes သာအများစု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာယာဉ်အသွားအလာနှင့်အခြားအတားအဆီးသွားလာ, အလုပ်ရှုပ်မြို့လမ်းများပေါ်တွင်သင်၏ကားကိုမောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလွင်ပြင်, ရိုးရှင်းသောပြိုင်ကားနှင့်အတူပျင်းလာပြီဖြစ်ကြောင်းလျှင်သင်ကိုလည်းနစ် Mode ကိုတစ်ဦးပါပေးနိုင်ပါသည်။
ဒေါက်တာယာဉ်မောင်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဂိမ်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာကစားသမားဂိမ်းရှိပါတယ် Modes သာ၏အမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးသူတို့ရဲ့မောင်းနှင်မှုစွမ်းရည်များချွတ်ပြသနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါကစားသမားမှကပ်ရန်သေချာသောတာဝန်များကိုနှင့်အချိန်ကန့်သတ်ပေးထားပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါရိုးရှင်းဂိမ်းနှင့်သာယာသောဂရပ်ဖစ်ယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်အများစုအတွက်အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးပါနှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုအလွန်ကြီးသောတဦးတည်းလုပ်ရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ ဤတွင်, သင်သုံးကွဲပြားခြားနားသည် Modes အတွက်ဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအွန်လိုင်းပွဲစဉ် mode မှာ, သင်ကကျပန်းအွန်လိုင်းကစားသမားကစားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိခုနှစ်တွင် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း mode ကိုသင်၏အဆွေခင်ပွန်းဆန့်ကျင်ပြိုင်ကားစဉ်, သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုချွတ်ပြသနိုင်ပါတယ်။ တတိယတစိနျချေါမှု Mode ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်စိန်ခေါ်နှင့်သင်တို့အဘို့အထဲက set ကားမောင်းတာဝန်များကိုဖြည့်နေစဉ်သင့်ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းများရိုက်နှက်ရန်ကြိုးစားနေရာအရပ်ဖြစ်၏။
သင်အွန်လိုင်း multiplayer mode ကစားချင်တယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ Google Play စပရိုဖိုင်းနဲ့ log မှရပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းရဲ့ Home Screen ကိုစာရင်းကွဲပြားခြားနားသော Modes သာရှိပါတယ်။ ဂိမ်းမျက်နှာပြင်တွင်, သငျသညျကားတွေ, စတိုးဆိုင်, ပရိုဖိုင်းကိုစာရင်းဇယားနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်စတင်တဲ့အခါ, သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကားကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအတန်းအစား KOS - အစအဦးသော်လည်းမှာ, သငျသညျတစ်ဦးတည်းသာရှေးခယျြမှုရှိပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျတိုးသကဲ့သို့, သင်ဝင်ငွေဟာဒင်္ဂါးပြားကို အသုံးပြု. သင်၏အမော်တော်ယာဉ် upgrade နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်ပေးခဲ့သောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်တာဝန်များကိုဖြည့်စွက်သကဲ့သို့သင်တို့ဒင်္ဂါးပြားရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပိုကောင်းသင်ပိုကောင်းသငျသညျအကြိုးကိုပေးလိမ့်မည်, လုပ်ဆောင်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, သင်အချိန်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ဒီဂိမ်းထဲမှာမောင်းနှင်မှုကိုင်တွယ်ရန်ထိန်းချုပ်မှုတော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစတီယာရင်ကိုသင်ကားတစ်စီးကိုညွှန်ကြားရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် screen ရဲ့ညာဘက်အောက်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ accelerator နှင့်ဘရိတ်အောက်ဆုံး-လက်ဝဲထောင့်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်ဘယ်ဖက်အပေါ် settings ကို အသုံးပြု. ကင်မရာကိုထောင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်နေစဉ်ဂီယာညွှန်ပြချက်ထိပ်ညာဘက်ထောင့်အပေါ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ စိန်ခေါ်မှုများအများစုနေတဲ့အချိန်ကန့်သတ်မှုနှင့်အတူလာကတည်းကသင်သည်လည်းမျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဖက်အခြမ်းတွင်တည်ရှိသောအတွတ် timer ကိုတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ရန်ရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကစားသမားကိုစိတျထဲကိုထမ်းဖို့လိုအပျတစျခုအရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါဂိမ်းထဲမှာအဓိကစည်းမျဉ်းဖြစ်ပါတယ်။ Breaking စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဂိမ်းကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့သင်တစ်ဦးအမှားလုပ်လိုလျှင်ဂိမ်းရုတ်တရက်အဆုံးသတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကစားစတင်ပါ။
ဒေါက်တာယာဉ်မောင်းတစ်ဦးအကြီးအကားတစ်စီးပြိုင်ကားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများဂိမ်းနည်းနည်းပိုမြန်နိုင်ခံစားရနေစဉ်, မှတ်၏ပဒေသာအဖြစ်ကောင်းစွာ၎င်း၏မျက်နှာသာအတွက်ရှိပါသည်။ သင်သည်သင်၏ Play စတိုးကနေ install လုပ်မပေးနိုင်လျှင်, သင်အမြဲသူတို့ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကစားရန်ပျော်စရာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်နာရီအားဖြင့်ပျံသန်းသတိထားမိမည်မဟုတ်! ထိုကဲ့သို့သောလွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှု, မျိုးစုံဂိမ်း Modes သာ, ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်နှင့်အသံများနှင့်မောင်းနှင်မှု Modes သာအမျိုးမျိုးအဖြစ်အင်္ဂါရပ်များ, တစ်တစ်တန်ဒီအကြီးအကားတစ်စီးပြိုင်ကားဂိမ်းအောင်ဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သင့်အွန်လိုင်းပြိုင်ဘက်တွေနဲ့သို့မဟုတ်သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်စရာရှိသည်!
အကောင်းဆုံးယာဉ်မောင်းဂိမ်းများအွန်လိုင်း ဒေါက်တာယာဉ်မောင်း Download ဒေါက်တာယာဉ်မောင်း APK ကို Download လုပ်ပါ ဒေါက်တာယာဉ်မောင်း APK ကို